Amụma RMA - Staba Electric Co., Ltd.
Akụkọ Staba Motor News
Weghachite ikike ikike ahia
Usoro nkwarụ ezighi ezi
Staba Electric Co., Ltd. Okwuchi (nkenke dị ka Staba) a na-ekwe ka ngwaahịa nwere ntụpọ na ngwongwo ma rụọ ọrụ n'okpuru iji ya n'ime oge akwụkwọ ikike. A na-achịkwa ọrụ ikike maka ngwaahịa ahaziri iche na nkwekọrịta dị iche iche ma ekpuchighị ya na akwụkwọ a.
Oge Akwụkwọ ikikeN'ozuzu, Staba na-enye akwụkwọ ikike ọnwa 24 kemgbe ụbọchị mbupu ahụ. Ọ bụrụ na okwu ikike dị na nkwekọrịta nkwekọrịta ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa dị iche, okwu nkwekọrịta ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa na-enwe mmeri.
Staba Ibu Ọrụ: Naanị ọrụ Staba dị n'okpuru akwụkwọ ikike ahụ bụ naanị mmezi nke nkwarụ site na iji akụkụ ọhụụ ma ọ bụ nke agbazigharị, ma ọ bụ dochie ngwaahịa ndị nwere nkwarụ nke ndị zụtara ya zitere. Staba nwere ikike iji ihe ndozi maka akụkụ nke ndị ọzọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ anaghịzi enweta site na ndị na-eweta ya.
Mwepu nke Akwụkwọ ikike: Staba anaghị eburu ibu ọrụ n'ihi ọnọdụ ndị a, n'okpuru nke akwụkwọ ikike ahụ bụrụ ihe efu ma kwụsị ịdị na-arụ ọrụ. 1. Achọpụtara ngwaahịa na ọ nwere ntụpọ mgbe oge ikike ahụ gwụchara. 2. E meela ngwaahịa a n'ụzọ na-ezighi ezi, mmegbu, nleghara anya, ihe ọghọm, ịmegharị, ịgbanwe, ma ọ bụ mmezigharị na-akwadoghị, ma ọ bụ site na mberede ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ọnọdụ ndị dị otú a ka Staba ga-ekpebi naanị ya na enweghị ezi uche. 3. Ngwaahịa emebiwo n'ihi ọdachi ma ọ bụ oke ọnọdụ, ma ọ bụ nke okike ma ọ bụ nke mmadụ, gụnyere mana ọnweghị oke mmiri, ọkụ, ọkụ ọgbụgba, ma ọ bụ nsogbu ọgba aghara. 4. Nọmba Oghere Usoro ahụ dị na ngwaahịa ahụ wepụrụ, gbanwee, ma ọ bụ mebie ya. 5. Akwụkwọ ikike ahụ agaghị ekpuchi mmebi ịchọ mma, ma ọ bụ mmebi mejupụtara n'oge mbupu.
Ogologo akwụkwọ ikike: Staba na-enye ndọtị agbatị nke enwere ike ịzụta n'aka onye nnọchi ahịa anyị mgbe ị debere iwu ahụ. Ego maka ịzụta akwụkwọ ikike agbatịkwuru bụ mgbakwunye, dabere na ọnụahịa ire ngwaahịa a.
Iji nyere ndị ahịa aka ịmaliteghachi ọrụ nkịtị ozugbo enwere ike ma zere mmefu na ngwaọrụ ndị anaghị emebi emebi, anyị nwere ịnụ ọkụ n'obi inyere gị aka na nchọpụta nsogbu dịpụrụ adịpụ ma chọọ ụzọ ọ bụla ga-esi edozi ngwaọrụ ahụ na-enweghị oge na-enweghị isi. nke iweghachite ngwaọrụ maka ndozi. Onye ahịa ahụ kwupụtara nsogbu, yana kpọtụrụ onye nnọchi anya ahịa Staba ma ọ bụ nkwado teknụzụ site na ịnye nkọwa nkọwa zuru ezu n'okwu, eserese, na / ma ọ bụ vidiyo. Staba na-agba mbọ kacha mma maka nchọpụta nsogbu dị n’ime obodo.
Naanị Staba na-anabata nloghachi site n'aka ndị zụrụ ahịa ozugbo. Ọ bụrụ na ị nwee nsogbu na ngwaahịa anyị biko laghachi na ebe ị zụtara.
Nọmba RMA: tupu ịlaghachi ngwaahịa ndị nwere nkwarụ, onye ahịa kwesịrị ịkpọtụrụ onye na-ere ahịa anyị maka ụdị RMA ya na nọmba RMA enyere ikike, ma mejupụta ma zighachite onye nnọchi ahịa ahụ ma ọ bụ info@stabamotor.com. Rịba ama na a ga-egosi nọmba RMA na mpụga ngwugwu niile azaghachi. Staba nwere ike jụ inye ndozi ma ọ bụ nnọchi maka ngwaahịa na-enweghị RMA wee weghachite ngwaahịa ahụ n'aka Onye Ahịa na nnakọta ibu.
Mmecha: RMA dị ire ụbọchị iri atọ (30) kalenda ka esiri wepụta ya na Staba. Ndị ahịa ga-eweghachi ngwaahịa ahụ akọwapụtara na RMA n'ime ụbọchị iri atọ (30) ma ọ bụ RMA ọhụrụ ga-achọ.
Ngwugwu ngwugwu: All ngwaahịa laghachi ga-juru n'ọnụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji gbochie mbupu mbibi.
Mkpebi Ọnọdụ Akwụkwọ ikike: Ozugbo enwetara ngwaahịa a, Staba na-ekpebi ọnọdụ akwụkwọ ikike site na ịlele nọmba Oghere na ịchọpụta ihe ndị ahụ. A ga-arụzi ma ọ bụ dochie ihe ikike akwụkwọ ikike na-enweghị ịkpọtụrụ ndị ahịa. Ọ bụrụ na ihe na-abụghị akwụkwọ ikike chọrọ mmezi onye ahịa ahụ zitere ụdị atụmatụ nke ụgwọ nke ha nwere ike nyochaa ma banye ma ọ bụrụ na anabatara ya. Agaghị arụzi ihe ndị na-enweghị ikike na-enweghị ikike ederede ederede nke ndị ahịa. Ọ bụrụ na e lere ihe anya n’enweghị ike idozi ya, a kpọtụrụ onye ahịa ahụ wee nwee nhọrọ nke (1) iweghachite ngwaahịa ahụ ma ọ bụ (2) ihichapu ngwaahịa ahụ.
Idozi eegwọ: A akwụkwọ ikike ihe kwesịrị ịrụzi n'efu. Ihe na-enweghị ikike ga-abụ onye na-ahụ maka ụgwọ ihe na ịrụzi ụgwọ ma ọ bụrụ na ọdabara.
Ebu Ibu: ma ọ bụrụ na in-akwụkwọ ikike, Onye Ahịa ahụ ga-akwụ ụgwọ mbata nke ngwaahịa eweghachitere na Staba ga-akwụ ụgwọ mbupụ nke rụziri ma ọ bụ dochie ngwaahịa ndị Ahịa; bụrụ na nke na-akwụkwọ ikike, ndị ahịa kwesịrị ịkwụ ụgwọ ma inbound na outbound ibu na-eri.
A rụziri ma ọ bụ dochie akụrụngwa maka oge fọdụrụnụ na oge izizi mbụ ma ọ bụ ụbọchị iri itoolu (90), nke ọ bụla toro ogologo. Iwu a nwere ike gbanwee na naanị ike Staba, n'oge ọ bụla, na-enweghị ọkwa ọkwa.
Moto, Agụụ Cleaner, Igwe Brushless, BLDC Igwe, Brushless DC Motor, BLDC Fan Motor, ase maka pricelist